उग्र राष्ट्रवादले आर्थिक लक्ष्य अवरोध गर्दछ। – BANKE POST
Posted on July 27, 2020 July 27, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
लेखक शिबराज कार्की को एक झलक
सन १९८८ मा जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीन भ्रमणमा गएका थिए, त्यस बेला चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार झण्डै उस्तै थियो। भारतमा प्रजातन्त्र र चीनमा गणतन्त्र लगभग एकै समयमा भएको हो। तर पनि चीनको विकास तीव्र गतिमा बढ्यो जुन भारतको भन्दा धेरै छिटो छ, कारण के होला ?
यसको कारण हो- चीनले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिन र आर्थिक लक्ष्यहरूको लागि शान्तिमय बाह्य वातावरण सिर्जना गर्ने निरन्तर प्रयासमा अटुट रहिरहेको परिणाम हो। अहिले पनि जब अमेरिकाले चीनलाई रोक्नको लागि विभिन्न प्रकारका नीति अपनाईहेको छ र यसको सामना गर्न चीनमा मूलधारको आवाज अझै पनि यो छ कि चीनले आफ्नै चीजको राम्रो व्यवस्थापन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिँदै जानुपर्दछ र देशलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्दछ।
आर्थिक विकासको अनुकूल र लक्ष्य हासिलको निम्ति चीनले शान्तिपूर्ण र स्थिर क्षेत्रीय वातावरण निर्माण गर्न मित्रता र साझेदारीको नीति अनुसरण गरेको छ, छिमेकी देशहरूसँग राम्रो छिमेकी सम्बन्ध र व्यावहारिक सहकार्यको सुदृढीकरण गरेको छ। यसले प्रासंगिक देशहरूसँगको क्षेत्रीय विवादहरूको समाधानका लागि मतभेदहरूलाई समेट्ने र संयुक्त विकासको खोजीमा वकालत गर्दछ र उत्तेजनाको सामना गर्ने ठूलो संयम अभ्यास गर्दछ। चीनको विदेश नीतिले न केवल यसको आन्तरिक आर्थिक विकास मात्र गर्दछ, साथै यसले छिमेकी देशहरुलाई पनि आर्थिक लाभ र विकास निर्माणमा फाइदा पुर्‍याउँछ।
तर भारतको विदेश नीतिलाई बारम्बार उसको उग्र राष्ट्रवादले अपहरण गरेको छ। हामीले लगभग हरेक चीन-भारत सीमा टकरावमा भारतीय उग्र राष्ट्रवादी उत्साहका छायाँ देखेका छौं। जब भारत सरकार घरेलु मामिलामा कडा काँडाको चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्दछ जुन सुल्झाउन निकै गाह्रो छ, त्यस बेला भारतले छिमेकी देशहरूसँग समस्या बनाएर जनताको ध्यानाकर्षण गर्दछ। यस प्रकारको दृष्टिकोणले घरेलु समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दैन। घरेलु समस्याहरू सुल्झाउने कुञ्जी आर्थिक वृद्धि हो, जसलाई स्थिर बाह्य वातावरण आवश्यक पर्दछ। भारतले धेरैपटक चीनसँग सीमा विवाद उत्पन्न गरेको छ। चिनियाँ जनताका लागि ती अव्यावहारिक कूटनीतिक कदमहरू हुन् र यसले भारतको हित गर्दैन।
गत दशकहरूमा चीनको विकास अनुभवले देखाउँदछ कि जबसम्म देशहरूले शान्तिपूर्ण कूटनीतिमा जोड दिन्छन् र आर्थिक विकासका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्दछन् तिनीहरूको अर्थव्यवस्थाको विकास र समृद्धि हुन्छ। अर्थव्यवस्था बृद्धि गर्न भारतसँग ठूलो आर्थिक सम्भावना छ। आशा गरौं कि भारतले आफ्नो आर्थिक विकासको लागि अधिक तर्कसंगत विदेश नीति लिन सक्छ र शान्तिमय वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सफल हुनेछ। छिमेकी देशहरूसँग को सम्बन्ध सुधार र सुदृढ गर्दै शान्ति को दियो बालेर विकास निर्माणका परियोजना द्रुत गतिमा अघि बढाई आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। भारतको विकास दक्षिण एसिया र बृहत्तर क्षेत्रमा पनि अनुकूल हुनेछ। हामी भारतको उदय भएको र शक्ति राष्ट्र भएको देख्न चाहन्छौं। लेखक – शिबराज कार्की
अर्थमन्त्रीज्यू, जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ ? रामेश्वर साह – काठमाडौं – विश्व मानव अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकार प्रयासरत छन् । नेपाल पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुधिरहेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वभरका देशले जस्तै नेपालले पनि लकडाउन […]